Mufakirka Muslimka ah | KEYDMEDIA ONLINE
Ugu horreen, si loo fahmo “mufakir” waxa uu yahay ayuu qeexay mufakir iyo erayada ka ag dhaw macna ahaan sida: mutakhasis, caalim, muslix, daaciyah, musaqaf iyo feylasuuf. Isagoo xusay erayada aadka usoo dhaween karaya macanaha “mufakir” iney yihiin: caalim, musaqaf iyo feylasuuf hasa ahaate uu ka sarreeyo musaqafka, kana hooseeyo feylasuufka.
In fikirku yahay: ka tallaabid xal taagan loona gudbo mid ka wanaagsan. Waxaa dhici karasa mararka qaar in dhib jiro, aadna la timaado xal. Balse xalkaasi uu yahay mid aan aad u habbooneen ama lacagta kaaga baxeesaa ay badan tahay. Markaan oo kale waxaa xaaladdaan looga gudbi karaa fakar wax kuu ool ah. Qoraagu wuxuu arrinkaan tusaale ugu soo qaatay 2-warshadooda oo Japan laga leeyahay sameeyana saabbunka.
Waxaa dhacday inay isku qasmeen sanduuqyadii saabbunku ka buuxay iyo kuwii faaruqa ahaa. Warshaddi, waxay keensatay qalab x-ray ah – oo la dhigay halka ay kasoo baxayaan sanduuqyada – si loo ogaado sanduuqa ay wax ku jiraan iyo mid ka aysan wax ku jirin ayagoo shaqaalana u qaatay arrinkaan. Halka shirkadda kale -oo tan hore ka yareed, dhibkaan oo kalana qabsaday- ay la yimaadeen marwaxada elektoonig ah laguna juusteeya awood ku habboon culeeska sanduuqa faaruqa ah lana dhigay halka ay kasoo baxayeen sanduuqyada. Taa oo ka yeeshay in si fudud kii faaruqa ahaa mesha looga rido.
Maxamad Abuukar Macallin (Laashin)